सावधान! निन्द्रामा एक्कासी उठ्नुले तपाईलाई यस रोगको संकेत दिन्छ, जानी राखौँ – Etajakhabar
सावधान! निन्द्रामा एक्कासी उठ्नुले तपाईलाई यस रोगको संकेत दिन्छ, जानी राखौँ
ताजा खबर:- निन्द्रासँग सम्बन्धित विभिन्न कुरा हामी सुन्दै आएका छौँ, जस्तै:- भरिपूर्ण निन्द्रा लिनुपर्दछ, सही तरिकाले सुत्नु पर्दछ, कुन आसनमा सुत्नु सहज हुन्छ, भरिपूर्ण निन्द्रा लिनुको के फाइदा छन् आदि । तर आज हामी तपाईलाई बताउँदैछौँ कि तपाई निन्द्राबाट कुन किसिमले उठ्नु हुन्छ, र त्यसको सिधा असर मुटुमा पर्छ ।
कतिपय मानिसहरू अत्तालिएर या एक्कासी उठ्ने गर्दछन् । तर के तपाईलाई थाहा छ कि कहिलै निन्द्राबाट ब्युझने बित्तिकै अचानक उठ्नु हुँदैन किनकी हर्ट अट्याकको सम्भावना अधिक बढ्छ । केही मानिसहरू रातिमा बाथरूम, पानी पिउन, मोबाइल चेक गर्न या अन्य कुनै कारणले उठ्ने गर्दछन् । हुनत: रातिमा यस्ता कामको लागि उठ्नु गलत होइन तर अचानक अत्तालिएर उठ्नु तपाईको लागि हानिकरण हुनसक्छ ।
एक्कासी अत्तालिएर उठ्नुको नोक्सान
चिकित्सकका अनुसार, जब हामी निन्द्रामा हुन्छौँ, तब हाम्रो मन र सबै इन्द्रिय अचेत अवस्थामा हुन्छ । यी इन्द्रियहरू अचेत अवस्थाबाट जागृत हुन केही समय लाग्छ । अचानक अत्तालिएर उठ्नाले इन्द्रिय चिन्तित हुनेगर्छ र यिनीहरूलाई आफ्नो सही पोजीशनमा आउने समय मिल्दैन । यसको साथै कतिपय मानिसहरूको भनाई अनुसार, सबै नसा जागृत भई मुटुलाई सही गतीले ब्लड पुर्याउन समय लाग्छ । सुतेको समयमा मुटुलाई ब्लडको आवश्यकता पनि कम हुन्छ र ब्लड भेसल्स पनि कम ब्लड पुर्याईरहेको हुन्छ । निन्द्राबाट अचनाक उठ्दा मुटुलाई एकदम अधिक ब्लड/अक्सीजन चाहिन्छ र शरीरलाई सप्लाई गर्न केही क्षण लाग्ने गर्दछ । यहि अवस्था हर्ट अट्याकको कारण बन्न सक्छ ।
यसकारण यदि तपाईलाई वा तपाईको परिवारको कुनै सदस्यलाई एक्कासी निन्द्राबाट उठ्ने बानी छ भने तुरुन्त परिवर्तन गर्नुहोस् किनकी निन्द्राबाट उठेर एक्कासी बेड छोड्दा मुटुमा दवाव बढ्न सक्छ । यदि तपाईलाई उठ्नु नै छ भने यहाँ उल्लेखित केही विशेष कुरा ध्यान राख्नुहोस् ।
यी उपाय अपनाउनुहोस्
-निन्द्राबाट उठ्ने बित्तिकै बेड छोड्नुहुँदैन, आफैँलाई थोरै समय दिनुहोस् ।
-निन्द्रा खुलेपछि कम्तीमा २ देखि ३ मिनेटसम्म बेड छोड्नुहुँदैन ।
-चाहे तपाई जति नै हतारमा भएता पनि एक्कासी बेड छोड्नुहुँदैन ।
-यदि तपाईलाई राति बाथरूम जानु छ भने निन्द्राबाट ब्युझेपछि केहि सेकेण्ड रोक्नुहोस् र बिस्तारै उठ्नुहोस् । जब तपाई निन्द्राबाट उठेर बेडबाट तल झर्नु छ भने खुट्टा सिधा फर्शमा राख्नुहुँदैन ।
-चप्पल लगाएर जानुहोस् ।
-यी उपायहरूलाई पालना गरी तपाई हर्ट अट्याक जस्ता समस्याहरूबाट बँच्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २१, २०७४ समय: १:१५:००
अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि जिताउने म्याराडोना अर्जेन्टिनाले हार्दा टाउको समात्दै रुन पुगे हेर्नुहोस ति दृश्य यी ८ तस्बिरमा